खाडामा आगलागी गराउने रक्सी पार्टीमा सहभागी वडासचिव पक्राउ - Websoft IT Nepal Pvt. Ltd. - Websoft IT Nepal Pvt. Ltd.
websoftitnepa[email protected] : 9842278940 Websoft IT Nepal Pvt. Ltd. Log in
आलगालीबाट ध्वस्त गाउँ र आलगाली घरमा छरिएका रक्सीका बाेतल । तस्बिरः बिस्नुप्रसाद न्यौपाने
कालिकोट : कालिकोटको खाडामा भएको आलगाली गराउने क्रममा रक्सी पार्टीमा सहभागी भएको आशंकामा कममा वडा सचिव पक्राउ परेका छन् । वडा सचिव बिष्णुकान्त प्याकुरेललाई शनिबार बेलुका पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ।
वडा अध्यक्षमानबहादुर भण्डारीसहित ५ जनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी बिनोद शर्माले जानकारी दिएका छन् । मान्छे नबस्ने नवीन न्यौपानेको घरमा मदिरा पार्टी गरिएको थियो । यहि पुस ८ गते स्थानीय खानेपानि आयोजनाको ट्रयांकी शिलान्यास गरिएको र सोही रात खसीको फिला र ह्याकुलो नवीनको घरमा लगेर पकाएर मदिरा पार्टी गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
पार्टीमा वडाका एक कर्मचारी र दुईजना शिक्षक पनि सहभागी थिए। आगलागी सुरु भएको घरमा १५ क्वाटर मदिराका बोतल फेला परेको छ । पलाँता मदिरा निषेधित गाउँपालिका हो ।
यो पनि पढ्नोस : ‘खाडामा ८७ होइन, ३२ घर मात्र जलेका हुन्’​
खाडामा भाडामा बस्दै वडा सचिव प्याकुरेलले आगलागीबाट भएको क्षतिमा सबैभन्दा बढी आफ्नो भएको विवरण पेस गरेका छन् । उनले ४ लाख नगदसहति ९ लाख ४१ हजारभन्दा क्षति भएको दाबी गरेका छन् । कार्यलयको ल्यापटप, क्यामरा र सम्पूर्ण कागजात जलेको दाबी विवरण दिएका छन् । तर उनले आगलागी हुनुभन्दा अगाबै आफ्नो लत्ताकपडा, भात पकाउने कुकरसमेत निकालेको पाइएकाले उनले दिएको क्षतिको विवरण झुटो भएको डीएसपी बिनोद शर्माको भनाइ छ । क्षतिको मुचुल्कामा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमसहितले सही गरेका छन् ।
सचिव प्याकुरेलकाे क्षतिकाे मुचुल्का
सचिव प्याकुरेलले यसअघि आफूले गरेका अनियमितताका कागज पनि आगलागीमा जलेको बहानामा गायब पारेका अनुमान प्रहरीले गरेको छ ।
मुचुल्काको राेहवर बसेकाहरुकाे नामावली